လူကွီးမိ ဘတှေ အပျေါ သိတတျလိ မ်မာလှနျးရုံ တငျမကပဲ ပညာရေးမှာ လညျးထူးခြှနျထ ကျမွကျတဲ့သမီးလေးစ ဈလှနျးရဲ့ အကွောငျးကိွုေ ပာပွလာ တဲ့ စိုငျးလှမျး – Shwe Likes
ပရိသတျွ ကီးရေ စိုငျးလှမျး အနုပ ညာလော ကမှာ ထိုကျသ ငျ့သလောကျပရိ သတျတှေ သိရှိထားတဲ့သူ တဈယော ကျပါ။ သူ့ရဲ့အိမျထော ငျေ ရးကတော့ အခုခြိနျ မှာ Single Father အနနေဲ့ ပွညျသူေ တှရဲ့အခြ ဈတျော သမီးလေး စဈလှနျးဝတီ ထကျကိုေ စာငျ့ရှောကျကာ ဘဝကိုေ အးခမျြးစှာဖွတျ သနျးနသေူ ပါ။
ဒီ​နမှေ့ာေ တာ့” REPORT CARD ကိုရတော့ ပါပါးစိ တျပူနတေဲ့ ဘာသာ မီ;မီး(အမှတျ၁၀၀)ရအော ငျဖွနေိုငျတယျ နျောတဲ့ …စိတျမပူစေ ခငျြတာ သိပမေဲ့ အင်ျဂလိပျကြော ငျးထားလို့ မွနျမာ စာ မွနျ မာစကားကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ ဖွဈမှာ ကိုစိတျပူမိတော့ ခဏခဏ ပွောဖွဈတယျ လမျးသှား လညျး မွငျသမြှဆိုငျးဘု တျကစာတှလေိုကျဖ တျခိုငျးတာတှလေု ပျသညျထိစိတျ ပူခဲ့တယျ။
သမီးရဲ့ အနီးကပျ အဖှားဆရာမကိုခြ ဈကွောကျရိုသေ ကွောငျ့လညျး ပါ တယျ 😁(ကနြျောတို့ညီကျိုတှလေညျး ငယျတုနျးက သမီးလိုပဲ စာမပှေဲ ဖွဖေို့သှား ခါနီးကို အစောကွီးထပွီး အိမျမှာ တဈခါအရငျဖွရေတာ 😖😅 )ခြီးကြူးခံလို့လဲ ပွီးရော ခွံထဲ ဆငျးအ သီးတကျခူးတာ ပွုတျကပြွီွးေ ခထောကျခေါ ကျသှားတဲ့ သူ့ပါပါးကို %%% အဲ့ဒါတှေေ ပါ့ စိတျပူနရေတာ ပါးရယျ …🥺ကနစေပွီး ဆူလိုကျတာ စုံလို့ သူကအကွောတော ငျပွငျပေးလို ကျသေးတယျ ​။
သူ youtube ကနေ ကွညျ့ ထားတာ တဲ့😅ဟုတျသလိုပဲ အကွောတော့ပွနျပျေါလာပွီးသကျသာလာတာပဲ အဆူတော့ခံ လိုကျရတယျ 😁 ဒီလိုလေး မွငျရဖို့ ဖွဈဖို့ အသိတရားဘာ သာတရားကို ယျခငျြ စာတရား ရှိဖို့ သိဖို့ကွိုစားပွောပွဆုံးမပေးခဲ့သမြှ ၁ဝနှဈနီးပါး ဆိုတဲ့ အခြိနျကာလက ဘယျလို ကုနျသှားမှ နျးမသိေ အာငျ ပါပဲ
ဒါပမေဲ့ အခု Report Card ကိုကွညျ့ပွီး အောကျမှာရေး ထားတဲ့ သမီးဆရာရဲ့ comment လေးကို ဖတျကွညျ့တဲ့အခါ ပီတိဖွဈ ရတာက တော့ဘာနဲ့ မှ မတူတဲ့ ခံစားမှုပါမွနျ မာစွာ မနျမာစကားအ တှကျ သမီးကို စိတျမပူတော့ပါ ဘူး…. ”ဆိုတဲ့
စာလေးနဲ့သမီးေ လးရဲ့သိတ တျလိမ်မာမှုတှကေိွုေ ပာပွခဲ့တာပါ။ပရိသတျတှေ လညျး ဖခငျရဲ့သှနျသငျဆုံးမမှုတှနေဲ့ ယဉျကြေးလိမ်မာစှာ ကွီးပွ ငျးလာတဲ့ စဈလှနျးလေးကို ခဈြရငျမှ တျခကျြပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။ Credit
ပရိသတ်ြ ကီးရေ စိုင်းလွှမ်း အနုပ ညာလော ကမှာ ထိုက်သ င့်သလောက်ပရိ သတ်တွေ သိရှိထားတဲ့သူ တစ်ယော က်ပါ။ သူ့ရဲ့အိမ်ထော င်ေ ရးကတော့ အခုချိန် မှာ Single Father အနေနဲ့ ပြည်သူေ တွရဲ့အချ စ်တော် သမီးလေး စစ်လွန်းဝတီ ထက်ကိုေ စာင့်ရှောက်ကာ ဘဝကိုေ အးချမ်းစွာဖြတ် သန်းနေသူ ပါ။
ဒီ​နေ့မှာေ တာ့” REPORT CARD ကိုရတော့ ပါပါးစိ တ်ပူနေတဲ့ ဘာသာ မီ;မီး(အမှတ်၁၀၀)ရအော င်ဖြေနိုင်တယ် နော်တဲ့ …စိတ်မပူစေ ချင်တာ သိပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်ကျော င်းထားလို့ မြန်မာ စာ မြန် မာစကားကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ ဖြစ်မှာ ကိုစိတ်ပူမိတော့ ခဏခဏ ပြောဖြစ်တယ် လမ်းသွား လည်း မြင်သမျှဆိုင်းဘု တ်ကစာတွေလိုက်ဖ တ်ခိုင်းတာတွေလု ပ်သည်ထိစိတ် ပူခဲ့တယ်။
သမီးရဲ့ အနီးကပ် အဖွားဆရာမကိုချ စ်ကြောက်ရိုသေ ကြောင့်လည်း ပါ တယ် 😁(ကျနော်တို့ညီက်ိုတွေလည်း ငယ်တုန်းက သမီးလိုပဲ စာမေပွဲ ဖြေဖို့သွား ခါနီးကို အစောကြီးထပြီး အိမ်မှာ တစ်ခါအရင်ဖြေရတာ 😖😅 )ချီးကျူးခံလို့လဲ ပြီးရော ခြံထဲ ဆင်းအ သီးတက်ခူးတာ ပြုတ်ကျပြီြးေ ခထောက်ခေါ က်သွားတဲ့ သူ့ပါပါးကို %%% အဲ့ဒါတွေေ ပါ့ စိတ်ပူနေရတာ ပါးရယ် …🥺ကနေစပြီး ဆူလိုက်တာ စုံလို့ သူကအကြောတော င်ပြင်ပေးလို က်သေးတယ် ​။
သူ youtube ကနေ ကြည့် ထားတာ တဲ့😅ဟုတ်သလိုပဲ အကြောတော့ပြန်ပေါ်လာပြီးသက်သာလာတာပဲ အဆူတော့ခံ လိုက်ရတယ် 😁 ဒီလိုလေး မြင်ရဖို့ ဖြစ်ဖို့ အသိတရားဘာ သာတရားကို ယ်ချင် စာတရား ရှိဖို့ သိဖို့ကြိုစားပြောပြဆုံးမပေးခဲ့သမျှ ၁ဝနှစ်နီးပါး ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလက ဘယ်လို ကုန်သွားမှ န်းမသိေ အာင် ပါပဲ
ဒါပေမဲ့ အခု Report Card ကိုကြည့်ပြီး အောက်မှာရေး ထားတဲ့ သမီးဆရာရဲ့ comment လေးကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ပီတိဖြစ် ရတာက တော့ဘာနဲ့ မှ မတူတဲ့ ခံစားမှုပါမြန် မာစြာ မန်မာစကားအ တွက် သမီးကို စိတ်မပူတော့ပါ ဘူး…. ”ဆိုတဲ့
စာလေးနဲ့သမီးေ လးရဲ့သိတ တ်လိမ္မာမှုတွေကိြုေ ပာပြခဲ့တာပါ။ပရိသတ်တွေ လည်း ဖခင်ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာ ကြီးပြ င်းလာတဲ့ စစ်လွန်းလေးကို ချစ်ရင်မှ တ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ Credit